Model Anastasiya Kvitkovová (22) tsy afaka mitelina ny mombamomba dia matihanina olo-malaza Kardashianové Kim mbola noheverina ho iray amin'ireo tsara indrindra sy higagana eo amin'izay amin'izao tontolo izao. Taorian'ny dia ny endriky ny afara dia aoka ny vehivavy tsy hita isa lehibe kokoa. Rosiana modely nefa milaza fa manana be izy tsara fanahy kokoa sy Kim Bum tsy tonga aza ny kitrokeliny.
Ny vatako dia entana. Asa sarotra isan'andro ny fananana ny hozako amin'ny vatako. Ny ranjoko no boribory mahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao ary tsy misy fiasa plastika mifanohitra amin'ny hafa. Amin'ny alina, matory amin'ny vavoniko aho, noho izany dia tsy mianjera ny tsorakazo ", hoy ny fanehoan-kevitr'i Rosia, izay niarahan'ireo olona sasany ny mombamomba azy ao amin'ny tambajotra sosialy.
Rosia, kosa, dia sahy nilaza fa tsy ho ela dia ho malaza kokoa noho ny tenany manokana i Kardashian.